Safal Khabar - पाकिस्तान हुँदै किन आउँदैछन् चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल ?
पाकिस्तान हुँदै किन आउँदैछन् चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल ?
शनिबार, २१ भदौ २०७६, ११ : ५७
वाङको औपचारिक भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । सँगै समस्यारहित नेपाल–चीन सम्बन्ध नेपालको समृद्धिको यात्राको भरपर्दो साझेदार बन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
तर नेपालले भने कश्मीरको विषय भारत र पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै आएको छ ।
यही बीचमा पाकिस्तानबाटै नेपाल वाङ आउनु अर्थपूर्ण भएको बताइन्छ।